Chelmo - Happy Father's Day Photo Contest စပြီနော်။
Happy Father's Day Photo Contest စပြီနော်။
☆ လျှောက်လွှာတင်ရန် -> https://basicfront.easypromosapp.com/p/926300
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Entry Link တွင် လျှောက်လွှာတင်နိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လျှောက်လွှာ (Entry Page) တွင်လေ့လာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်အချိန် -> 10.6.2018 - 18:00 ( Sunday )
၀၁. လျှောက်လွှာတွင် Facebook Account ၏ Profile ပုံကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သောကြောင့် မိမိပုံမဟုတ်သော ရှုခင်းပုံများ၊ ကာတွန်းပုံများထည့်သွင်းထားသူများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၀၂. လျှောက်လွှာတွင် Facebook Account ၏ နာမည်ကို အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်သာ နာမည်ပေးရန်အကြံပြုပါသည်။
၀၃. လျှောက်လွှာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းချိန်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ရေးသားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
MamyPoko Myanmar Facebook Page တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာနှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေး၏ ဓါတ်ပုံ *1 ကိုတင်ပေးရပါမည်။ *1 သားသား/မီးမီးနှင့်အတူ ဖေဖေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ပေးပို့ရမှာပါ။ သတိထားရန်အချက်မှာ အဖေများနေ့ဖြစ်သောကြောင့် ဖေဖေ နှင့် သားသား၊မီးမီး များသာ ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး မေမေများ ပါဝင်ခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
နောက်ဆုံး ရွေးချယ်ခံရသူ(၅)ဦး MamyPoko Myanmar Page တွင်ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ အထူးဆုလက်ဆောင်ကတော့ June 17 တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျရောက်မယ့် အဖေများနေ့မှာ Lotte Hotel ရဲ့ Sunday Brunch Ticket ကို (၁) ဦး လျှင် (၂) စောင် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sunday Brunch Buffet Ticket (၂)စောင် တွင် ဖေဖေ၊မေမေနဲ့အတူ(၆)နှစ်အောက် သားသား၊ မီးမီး (၂)ဦး လိုက်ပါသုံးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
- ပြိုင်ပွဲဝင်စည်းကမ်းများ -
- မွေးကင်းစမှ(၃)နှစ်အတွင်း သားသားမီးမီးတို့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
- သားသား/မီးမီးနှင့်အတူ ဖေဖေနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ပို့ပေးရမှာပါ။ သတိထားရန်အချက်ကတော့ ဖေဖေ(တစ်ယောက်) ထဲနဲ့အတူ သားသား မီးမီး လေးတွေပုံသာ လက်ခံမှာပါရှင်။
- ပြိုင်ပွဲဝင်(၁)ဦးလျှင် မိမိစိတ်တိုင်းကျဓါတ်ပုံကို(၁)ကြိမ်သာပို့ပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ အခြားသော Account များမှတဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ဓါတ်ပုံများကို အကြိမ်ကြိမ် ပို့လာပါက ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ပုံများကို ပယ်ဖျက်ပါမည်။ ပယ်ဖျက်ခံရသူ၏ ဓါတ်ပုံကို MamyPoko Myamar Facebook Page တွင်ဖော်ပြခြင်းမရှိသလို ပယ်ဖျက်ကြောင်းကိုလည်း အကြောင်းကြားမည် မဟုတ်ပါ။
- ပြိုင်ပွဲဝင်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စရပ်များကို ပြိုင်ပွဲဝင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်တွင် မူတည်၍ Mycare Unicharm Company ၏ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါမည်။
- မြန်မာပြည်တွင်း နေထိုင်သူများသာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Unicharm မိသားစုများနှင့်အတူ အခြားသက်ဆိုင်သော Company များမှ မိသားစုဝင်များ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိပါ။
Hotline : 09 9649 57212